Mumoyo mikuru mubedheni Art sens - mazano eimba nebindu
28.10.2017 Yakatumirwa na: Art Sense
Kuwedzera kune yakajairwa rectangular imba yekurara mhinduro uye zvakafanana zvekushongedza zvakatenderedza mune imwe yakafanana fomu, kune zvigadzirwa zvemakamuri anotenderera ekurara uye / kana kutenderera kurongedzwa mukamuri ino. Dzimwe nguva sarudzo mbiri idzi dzinosanganisirwa zvichienderana nesarudzo yekugadzira. Kusanganiswa nezvimwe zvinowedzerwa zvinotsigira iwo musimboti wepfungwa - dzakakomberedzwa zvimiro mukamuri yekurara zvinotenderwa. Chero ipi yaunoda kusarudza, kugara mukamuri yekurara yakadaro ichave inofadza chaiyo.
yakatungamira mwenje, drywall, imba yekurara, rakatenderedzwa, yakakomberedzwa imba yekurara, yekurara mazano, yekurara mazano, imba yekurara yakakamurwa, imba yakanaka yekurara, imba yekutandarira, mumba mokurara, yakamiswa ceiling, kuvheneka, mwenje yakavanzika, imba yekurara, denga, manhamba, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Imba yakaisvonaka muItari
A yemazuva ano asi ichokwadi Italia villa. Ndakaisirwa munzvimbo inoyevedza ...
Dzakati wandei dzinoshamisa uye dzemazuvano imba yekutandarira dhizaini. Kuumbwa kweiyo Elegance ...
Kuvanza Imba yekurara Panyaya yekutarisa nzvimbo mumba, imba yekurara ...
Mazano ekutenderera ekushongedza madziro
Pfungwa yekushongedza madziro nezvirongo zvakapoteredzwa haingori anoyevedza, asiwo ...
Dema uye dema oval yakavezwa yakamiswa ceilings
Kusarudzwa kwemavara akasviba uye matema mukugadzira masimendi akaomeswa ane akatenderera uye akaora mativi